အီးမေးလ်visionသည်အီးမေးလ်၊ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နောက်ကျောAprilပြီလကျနော်တို့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် Emailvision သည် SmartFOCUS ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အခုတော့အောက်တိုဘာရောက်ပြီ။ ပေါင်းစည်းမှုရဲ့ရလဒ်ကအံ့သြစရာပဲ။ အီးမေးလ်၊ လူမှုရေးနှင့်ဖောက်သည်ထောက်လှမ်းရေးတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည် တစ်ခုတည်းဖြေရှင်းချက်၌တည်၏။ အီးမေးလ်visionကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ကင်ပိန်းတပ်မှူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
နေပြည်တော် Terabyte အရွယ်အစားသိုလှောင်ရုံများတည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည့် client-server ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို drag and drop interface တစ်ခုတည်းဖြင့်အလွယ်တကူဖြတ်တောက်ပစ်သည်။
SmartFOCUS ဝယ်ယူမှုမတိုင်မီက Emailvision သည် Objective Marketer ကိုဝယ်ယူခဲ့သည် - လူမှုမီဒီယာဒိုင်ခွက်။ ၎င်းတို့သည်လူမှုရေးနှင့်ဖောက်သည်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာ၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကို၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိရာတွင်ပေါင်းစည်းလိုက်ပုံရသည်။ ကင်ပိန်းတပ်မှူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ စကားလုံးတွေကတရားမျှတမှုမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူတို့စုစည်းထားတဲ့ဗွီဒီယိုတခုရှိတယ် -
စက်မှုလုပ်ငန်းပြproblemနာကဘာလဲ? အွန်လိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်အချက်အလက်အမြောက်အမြားကိုဖန်တီးခဲ့သော်လည်းကြော်ငြာ / စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောပြissueနာတစ်ခုမှာ၎င်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေတာများမှလုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အရင်းအမြစ်များစွာသုံးစွဲခြင်း ဖြစ်၍ ၀ ယ်ယူသူများ၏ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များသည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းစသည်တို့နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
ဒီပြProbleနာကို Campaign Commander Enterprise Edition ကဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ။ Emailvision သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား၎င်းတို့၏အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်းနှင့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများမှအချက်အလက်များကိုအသုံးဝင်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖြစ်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ ဤအသိဥာဏ်ဖြင့်သူတို့သည်ဖောက်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြမ်းနိုင်ပြီးယင်ကောင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုပိုမိုပေးနိုင်သည်။ ရောင်းသူတစ် ဦး တည်းမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေသိသိသာသာတိုးလာသည်ကိုသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
beta ဖောက်သည်တွေဘာပြောခဲ့လဲ။ beta စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်မှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကကုန်ပစ္စည်းသည်ရက်ပေါင်းမှစက္ကန့်မျှသာရှိသောအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်မှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်စေသည်။
SaaS ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။ ဖောက်သည်များ၏ထောက်လှမ်းရေးသည်တန်ဖိုးရှိသော်လည်းယခင်ကလည်းစျေးကြီးခဲ့သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များသည်ဒေါ်လာ ၁ သန်းခန့်ရှိပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်လများစွာကြာခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုနားလည်ရန်ဒေတာလေ့လာသုံးသပ်သူလည်းယူခဲ့ပါတယ်။ Campaign Commander Enterprise Edition ကမည်သူမဆိုအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာမြင်ယောင်နိုင်ပြီးချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းအသစ်များကိုတီထွင်ရန်သူတို့၏အတွေးအစဉ်လိုက်ကိုလိုက်နာစေသည်။
Emailvision ကိုဘာကြောင့်ဂရုစိုက်သင့်သလဲ။ Emailvision သည်တိုးချဲ့မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပြုလုပ်သောအချိန်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ယခုနှစ်တွင် smartFOCUS နှင့် ObjectiveMarketer ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံ ၁၉ နိုင်ငံတွင်ရုံးများနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်သည်သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ၏ဆက်စပ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်စေရန်အပြည့်စုံဆုံး၊
Nick, Charles နှင့် Emailvision ရှိအဖွဲ့အားဂုဏ်ပြုပါသည်။ DK New Media သူတို့ရဲ့ဝယ်ယူ၏ထိုအချိန်ကအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် နေပြည်တော် နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း၌ဤအမှန်တကယ်တော်လှန်ရေးသမားတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ မှာသရုပ်ပြအတွက် sign up ကို Emailvision ၏ Campaign Commander Enterprise ဆိုက်။